छोरालाई बोकेर हि’ड्न सक्ने भए कृष्ण, भन्छन्, छोरालाई ईन्ट,रनेशनल प्लेयर बनाउने चा,हाना छः (भिडियो सहित) – Ap Nepal
रुपा र कृष्ण वलीको जोडी सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल जोडी हो । उनीहरुको जिवनको सं’घर्ष मानिसको जिवनका लागि प्रेरणा दिने खालको छ ।
रुपा र कृष्ण क’लियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । निकै अ’प्ठेरो अवस्था,मा रुपाले कृष्णलाई साथ दिएकी छन् । उनको मायाका कारणले नै कृष्णले आफ्नो जिवनको सबैभन्दा दु“खद् अवस्थावाट पार भएका छन् । उनीहरु अहिले आफ्नो जिवनलाई निकै उल्लास,पूर्ण तरिकाले बिता,एका छन् ।
दुर्घ,टना मा हात र खुट्टा गुमा,एका कृष्णलाई रुपाको माया र साथ नै जिउने आधार बन्यो । एक अर्कालाई निकै माया गर्ने यो जोडीलाई यति ठूलो दुर्घटनाले पनि छुटाउन सकेन । हात खुट्टा गुमाjएका कृष्णलाई रुपाले माया, साथ र हौसला दुवै दिइन् ।
सामाजिक सञ्जा’लमा चलेको अभियानका कारण उनीहरुले आर्थिक सहयोग पाए । देश र विदेशवाट आशिर्वाद र माया पाए । अहिले कृष्णले कृतिम खुट्टा लगाएका छन् ।
आफ्नो जिवनमा आएको सबैभन्दा खुसीको क्षण सार्वजनिक गर्दै रुपाले आफुलाई आशि,र्वाद दिन भनेकी छन् । ति तस्विरमा हजारौंले बधाई दिएका छन् । उनीहरुको खुसीमा खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।
यो उनीहरुको खुसीमा लाखौं मानिसको साथ समर्थन र सहयोग छ । त्यसैले यिनीहरु एक भाग्यमानी जोडी पनि मान्न सकिन्छ ।
जिवनमा आएको एउटा ठूलो वि’पत्तीको साम’ना गर्न उनीहरुलाई लाखौं मानिसको साथ र समर्थन प्राप्त भयो । सबैको सहयोगका कारण नै यो सम्भव भएको हो ।
‘भोली ऊ के बन्छ हामीलाई थाहा छैन तर उस्लाई ईन्टरनेशनल प्लेयर बनाउने चाहाना छ ।’ यो भनाई हो कृष्ण वली र रुपाको । उनीहरुको छोरा रियान्स आजको यो समयमा चार महिनाको भईसकेको छ । कृष्ण र रुपाको जोडी पनि समाजकोलागी निकै उदाहरणीय र साहासी जोडीको रुपमा चिनिन्छ ।
आफ्नाआफ्न्तदेखि सबैको माया पाउँदा निकै खुशी लाग्ने कुरा सुनाउँदै रुपाले छोराको स्याहार गर्न गाह्रो पनि नभएको र भनेको जस्तो सजिलो पनि नभएको बताईन् । साथै उनले बाबुलाई धेरै जसो कृष्णले नै खेलाएर घरको काम गर्न आफुलाई सहयोग गर्ने गरेको पनि सुनाईन् । कृष्णले पनि बाबु खेलाउँदा आफुलाई निकै नै भाग्यशाली भएको कुरा सुनाए । दुवैले छोरा रियान्सलाई राम्रोसंग हुर्काउन र छोराको लालनपालन गर्नकोलागी मिलेर गरेको कुरा सुनाए ।
Prevबालिकाले अनलाइनबाट एउटा खाना अर्डर गर्दा , घरअगाडि ४२ जना डे:लिभरी ब्वायको लाग्यो लाइन (भिडियो सहित)
Next‘छोरीको बधाईको फोनले तीनदिनसम्म घाँस का:ट्न जान पनि पा’ईन’- सपना रोका मगरका बाबा आमा भन्नुहुन्छ (भिडियो सहित)
पैदलयात्रीको मृत्यु ,प्रहरी चाैकी अगाडी नै दुर्घटना हुदाँ पनि प्रहरीले सूइ काेसम्म पाएन ।CC Tv मा जे देखियो (भिडियो सहित)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (118162)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (71512)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (45474)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (40281)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (37848)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (36590)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (35887)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (35605)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (33920)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (32573)
न्यादी हाइड्रोपावरको IPO नतिजा सार्वजनिक यी ५ तरिकाबाट हेर्नुहोस् …